प्रमुख पर्शुराम नगरपालिका, डडेल्धुरा
पर्शुराम नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर साउदसँग वि.सं २०४९ मा तत्कालीन जोगबुढा गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष निर्वाचित भई काम गरेको अनुभव छ । उनी तत्कालीन डडेल्धुरा जिल्ला विकास समितिको सदस्य पनि बने । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि भने उनी राजनीतिबाट टाढा रही निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा लागे । व्यवसायको क्षेत्रबाट पुनः उनी गतवर्ष स्थानीय तहको प्रमुखको निर्वाचनमा विजयी भएका छन् । उनै साउदसँग नगरपालिकाको विकास निर्माणका बारेमा कारोबारकर्मी हरिश चन्दले गरेको कुराकानीको सार :
नगर सञ्चालनको अनुभव कस्तो छ ?
हामीले चुनावका बेला जनताका माझ जेजति प्रतिबद्धता जनाएका थियौं, तिनै प्रतिबद्धताका आधारमा रहेर १२ वटै वडा कार्यालयबाट जनतालाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छौ । पहिलो काम जनताको घरदैलोमा सेवा भनेर काम गर्येउ भने दोस्रो काम कतिपय स्थानमा सडक बाटो थिएन अहिले ११ वटै वडामा सडक पुगेको छ ।
नगरको प्राथमिकताको क्षेत्र सडक नै हो ?
त्यसका साथै हामीले करिब २६ करोड विकास निर्माणका लागि आएको बजेटमध्ये अरु वर्षको तुलनामा थुप्रै काम भएका छन् । अहिले हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, गोरेटो बाटोलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि उतिकै रूपमा काम गरिरहेका छौं । यहाँको त्रिवेणी क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पस बनाई सकेका छौं । पर्शुरामधाममा रहेको संस्कृत विद्यापीठलाई पनि आंगिकका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेका थियौं यो पनि सफल भएको छ । नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ । जोगबुढा अस्पताललाई हामीले कम्तीमा पनि २५ देखि ५० शैयाको बनाउने सोच बनाएका थियांै । यसलाई पनि सरकारले ५० शैयाको बनाउने भनेर घोषणा गरिसकेको छ । पर्शुरामधामलाई धार्मिक पर्यटकीय रूपमा विकास गर्नका लागि डिजाइन इस्टिमेट पास भई टेन्डरको प्रक्रियामा छ ।
चालू आवमा जुन पर्शुरामसँग २६ करोड बजेट थियो यसलाई कसरी विनियोजन गर्नु भयो ? अनि आन्तरिक आय स्रोत के छ ?
सबै वडालाई समान तरिकाले बाँडेका थियौं । आवश्यकताका आधारमा कुनैलाई बढी रकम पनि गयो । ५० लाखदेखि अढाइ करोडसम्म एक वडालाई विनियोजन गरेका थियौं । आन्तरिक आए न्यून छ । आगामी दिनमा यसलाई बढाउने योजनामा छौ ।
पर्शुराम नगरपालिकाका मुख्य चुनौती र अवसर के के हुन् ?
मुख्य चुनौतीभन्दा ठूलो समस्या भू–क्षय हो । चुरे क्षेत्रसँग जोडिएको नगरपालिका भएकाले भू–क्षयले गर्दा यहाँको धेरै उर्वराभूमि नोक्सान भएको छ । तत्कालीन जोगबुढा–२ सिमलखेत अहिलेको पर्शुराम–६ भएको छ, त्यो पूरै वडा तथा बस्ती नै बाढीले बगाएको छ । शीर्षमा, कलेना, कटालमा पनि बाढी पहिरोले बगाएको छ । साँदनी, पुन्तुरा खोलाले दुःख दिएको छ । पर्शुरामाको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नदी नियन्त्रण हो । बस्ती जोगाउन नै मुस्किल छ ।
यसका साथै अवसर भनेको यहाँ खेर गइरहेको प्राकृतिक स्रोत साधान नै हुन् । नदीमा गिट्टी, बालुवामाथि उठेको अवस्था छ । यसलाई हामीले वैज्ञानिक ढंगबाट आईई गरेर राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ । कृषिका लागि पनि उर्वरा जमिन प्रशस्त छ । जडिबुटीको सम्भावना पनि उच्च छ ।
नगरका दीर्घकालीन सम्भावित स्रोतहरू अरू के के बन्न सक्छन् ?
मैले भनिसकें गिट्टी, बालुवा, काठ, जटिबुडीलगायत अन्य वैन पैदावारको ठूलो सम्भावना छ । यससँगै जनसंख्या बढी भएको क्षेत्र भएकाले एकीकृत आयकरले पनि आय स्रोत बढाउँछ । यतिले मात्रै पुग्दैन हामीले भोलिका दिनमा यहाँ उद्योगधन्दा जस्तै क्रसर, इँटा उद्योग खोल्न सक्छौं । अन्य विभिन्न घरेलु उद्योग पनि खोल्न सक्ने सम्भावना छ । पर्शुरामधाममा पर्यटनको ठूलो सम्भावना र महत्व छ । अहिले त्यसको गुरु योजनासहित बोलपत्रका रूपमा संरक्षण, संवद्र्धनसँगै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै अघि बढिरहेका छौ । रंगुन नदीमा पुल बन्न लागेको छ भने सडकको स्तरोन्नति कालोपत्रे गरी फराकिलो बनाउने योजना छ । प्रायः सबै वडाका बस्तीमा सडक पुगिसकेको छ । अब कुन स्थानमा कृषि तथा पशुजन्य चिज वस्तु उत्पादन हुन्छ यसको अध्ययन अनुसन्धान गरी उत्पादनमुखी बनाई रोजगार प्रदान गर्नेछौं ।
तपाईं स्थानीय सरकार प्रमुख पनि ? क वर्गको निर्माण व्यवसायी पनि ? निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण भौतिक पूर्वाधारका काम रोकिएका छन् ? दुईवटैमा तपाईं हुदा केलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ ?
म निर्माण व्यवसायी मेरो आफ्नो प्रालि हो । अहिले मैले निर्माण व्यवसायको काम आफ्नो घर परिवार र कर्मचारीको जिम्मा दिइसकेको छु । म अहिले विशुद्ध राजनीतिमा लागेर जनताको सेवा गरिरहेको छु । नगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत गरेका विकास निर्माणका काम अधिकांश सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही काम अन्तिम चरणमा छन् ।
तपार्इंले निर्माणको प्रसंग जोड्नु भयो । निर्माणका कतिपय ठाउँमा राज्यले निर्माण व्यवसायीमात्र काम गर्दैन भन्ने दोष दिन्छ । त्यसमा मेरो सहमति छैन । कुनै ठाँउमा कुनै निर्माण व्यवसायीले नगरेको हुनसक्छ । तर मुख्य कुरा के भने राज्यले डिजाइन इस्टिमेट गरेर बोलपत्र आह्वान गर्छ । बहुवर्षीय ठेक्काहरू निस्कन्छ बहुवर्षीय ठेक्काअनुसारको रकम छुट्याएको हुदैन । कतिपय ठाउँमा डिजाइन स्पष्ट हुँदैन । कुनै ठाउँमा मुआब्जाको समस्या छ । कुनै ठाउँमा डिजाइन परिवर्तनको समस्या छ । प्राविधिकको पनि कमी छ । यी र यस्ता कयौ कारणले योजना सम्पन्नमा ढिलाइ भएका छन । निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिने ठाउँ छैन । देशभरि अहिले निर्माण व्यवसायीले पैसा नपाएर पनि काम रोकिएको अवस्था छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई यस्ता समस्या आउन नदिन पर्शुरामको स्थानीय सरकारले के गर्छ ?
हामीसँग जेजति स्रोतसाधन र बजेट छ, त्यसैअनुसारका योजना सञ्चालन गर्छौं । रंगुन नदी तटबन्धको गुरुयोजना नै बजेट अभावले प्रभावित भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि बजेट छैन भन्ने सुनिएको छ । यो दुर्भाग्य हो । नेपाल सरकारले टेक्न लगाउने अनि पैसा दिन नसक्ने समस्या हो । यसका लागि हामीले माननीयज्यू र सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइसकेका छौं ।